भर्खरै बुटवल मा प्रहरीद्वारा फा’यर, के भएकाे यस्तो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै बुटवल मा प्रहरीद्वारा फा’यर, के भएकाे यस्तो!
भर्खरै बुटवल मा प्रहरीद्वारा फा’यर, के भएकाे यस्तो!
काठमाडौँ । आइतबार साँझ नम्बर ५ प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गाडीमाथि ढुङ्गा प्र’हार भएको छ । काठमाडौंबाट बुटवल जाँदै गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको गाडीमाथि बुटवलको चौराहमा ढुंगा प्र’हार भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलको गाडीमाथि ढु’ङ्गा प्र’हार भएको जनाएको छ ।
प्रहरीले ढुंगा प्र’हार गर्ने ६ जनालाई समेत प क्रा’उ गरेको छ । ढुंगा प्र’हारबाट मुख्यमन्त्रीका अगुवा र पछुवा गाडीमा समेत क्ष’ति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । मुख्य मन्त्री सवार गाडीमा ढुंगा प्र’हार भएपछि प्रहरीले केहि रा’उन्ड हवाई ‘फायर समेत गरेको छ । अहिले घटनास्थलमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई कांग्रेस कार्यकर्ताले कोटीहवा, मणिग्राम र शंकरनगर क्षेत्रमा का’लो झण्डा देखाएका थिए। प्रदेश ५को राजधानी दाङको भालुवाङ प्रस्ताव गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेस सहित रुपन्देहीका संघ संस्था आ’न्दोलित छन। राजधानी दाङ सार्ने प्रस्तावको वि’रोधमा कांग्रेस रुपन्देहीले आइतबार जिल्ला बन्द आह्वान गरेको थियो । बन्द आह्वानको बेला कडा सुरक्षाबीच मुख्यमन्त्री बुटवल आउँदै थिए ।
बलिउडका खिलाडी अक्षय कुमारले सुशान्तको विषयमा मुख खोले
बलिउडमा आउटसाईडर भएर प्रवेश गरेपनि सुशान्त सिंह राजपुतको विषयमा केही नबोलेको भनेर आरोप खेप्दै आएका बलिउडका खेलाडी अक्षय कुमारले मुख खोलेका छन् । अक्षयले लामो समयपछि सुशान्त सिंह राजपुत र बलिउडमा ‘ड्र’ग्सको मुद्दा बारे आफ्नो मौनता तोडेका छन् ।
उनले ट्विटर मार्फत भिडियो जारी गर्दै उनले यस विषयमा आफ्नो राय व्यक्त गरेका छन् । उनले फ्यानहरुसँग सबै फिल्म उद्योगलाई एकै तराजुमा न तौलन पनि अपिल गरेका छन् । अक्षय कुमारले भिडियो जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आज धेरै भारी मनले कुरा गरिरहेको छु, पछिल्लो केहि हप्तामा धेरै देखियो । फिल्मको माध्यमबाट हाम्रो देशको महत्व र सस्कृतिलाई विश्वका कुना कुनामा पुरयाई रहेका छौ । देशका जनताको भावनालाई फिल्मको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरीरहेका छौ ।’
अक्षय कुमारले अगाडी भने, ‘सुशान्तको मृत्युपछि यति धेरै समस्याहरु आएका छन्, जुन कुराले हामीलाई पनि दुखी बनाएको छ । ‘ड्र’ग्स को बारेमा उनले भने, ‘ड्र’ ग्सको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’ अक्षय कुमारले फ्यानलाई एकै तराजुमा सबैलाई राखेर न तौलन पनि अपिल गरे । यसको साथ अक्षय कुमारले मिडियालाई कुनै पनि मुद्दामा आफ्नो आवाज उठाउँदा संवेदनशीलता राख्न आग्रह गरे ।
अन्तमा उनले बलिउड उद्योगमा परिर्वतनका प्रयासहरु बारेपनि कुरा गरे । उनको यो भिडियोलाई बलिउडका करण जोहर, सिद्वार्थ मलोहत्रा, अंगद बेदी र वरुण धवनले पनि सर्मथन गरेका छन् ।
रुकुम घटनामा मा’रिएका नववराज बिकको घर पुगेर बन मन्त्रीले पुरानो घाउ को’ट्या’ए, न्याय चै कहिले दिने सरकार?
मकवानपुरमा ड’रलाग्दो सुमो दुर्घटना, २ को ज्यान गएपछि यस्तो डरलाग्दो अवस्था!
फोन चार्ज गर्दै इयरफोनमा गीत सुनिरहेका २४ वर्षे युवकको करेन्ट लागेर ज्यान गयो, तस्विर देखेपछि सबै रोए -तस्विर सहित
रामबहादुर बम्जन बारे खुल्यो एक्कासी यस्तो रहस्य…पुरा हेर्नुहोस भिडियो सहित
दु:खद खबर! प्रहरी प्रसासनलाई नै चुनौती – कारागारभित्रै झुण्डिएर आत्महत्या